Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ တိဘက်ဒေသ၌ လေဆိပ်သစ် သုံးခု တည်ဆောက်မည်
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Lhasa မြို့ရှိ Gonggar လေဆိပ်သို့ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျိနန်မြို့မှ လေယာဉ်တစ်စင်း ပျံသန်းလာစဉ်(ဆင်ဟွာ) Science & Technology
အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်က လေဆိပ်သစ် သုံးခု တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် တိဘက်ဒေသရှိ Lhasa Gonggar လေဆိပ်တိုးချဲ့ခြင်းအား ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း CAAC ထံမှ သိရသည်။
လေဆိပ်သစ် သုံးခုအား Lhunze ကောင်တီ ၊ Tingri ကောင်တီ နှင့် Burang ကောင်တီတို့တွင် အသီးသီး တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ လေဆိပ်တိုးချဲ့ခြင်း စီမံကိန်းတွင် Lhasa Gonggar လေဆိပ်၌ ဒုတိယ လေယာဉ်ပြေးလမ်း တည်ဆောက်ခြင်းများ ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စီမံကိန်းတွင် စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးမှာ ယွမ်ငွေ ၁၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၀၉ ဘီလီယံခန့်) ကျော်လွန်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် တိဘက်ဒေသတွင် ဒေသခံများ၏ ခရီးသွားလာရေး လိုအပ်ချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေး ၊ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ရည်ရွယ်ကြောင်း သိရသည်။
တိဘက်ဒေသသည် Qinghai-Tibet ကုန်းပြင်မြင့်ပေါ်တွင် တည်ရှိကာ လမ်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်းအတွက် ရှုပ်ထွေးသော ပထဝီအနေအထားများ ရှိခြင်းတို့ကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် တိဘက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တားဆီးတစ်ဆို့မှု ဖြစ်စေခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံသည် တိဘက်ဒေသတွင် အခြေခံအဆောက်အဦ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ တိဘက်ဒေသသည် လေယာဉ်ဖြင့် မြို့ပေါင်း ၆၁ မြို့အား ချိတ်ဆက်ထားခြင်းနှင့်အတူ စုစုပေါင်း လေကြောင်းခရီးစဉ် ၁၃၀ ခု ပြေးဆွဲခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ယင်းလေဆိပ်များမှတဆင့် ခရီးသည် စုစုပေါင်း ၅ ဒသမ ၁၈ သန်း ဝင်ထွက်သွားလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Since late 2012, China has been increasing its infrastructure investment in Tibet. Tibet has launchedatotal of 130 air routes, with 61 cities connected by flights. The number of passenger trips made through these airports totaled 5.18 million in 2020. Enditem
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်ကို Zhurong ဟု အမည်ပေး
Next Article တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး 5G မိုဘိုင်းကွန်ရက် တည်ဆောက်